တောင်ရေးမြောက်ရေး စာစုများ: 2015
ဒီနေ့ မနက် အိပ်ယာကနိုးခါက လမ်းထဲမှာ ပျိုပျိုအိုအို လူကြီးလူငယ် အားလုံးဝမ်းသာအားရ အော်ဟစ်သံတွေနဲ့ တစ်နေရာကို စုပြုံသွားကြတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ မင်းသား ကိုနေတိုးလာလို့ လား မင်းသမီး တစ်ယောက်ယောက်များလာလို့လား။ တခြား ဆယ်လီဘရစ်တစ်ဦးဦးများလာသလားလို့ တော့ မထင်လိုက်ပါနဲ့မိတ်ဆွေ။ တစ်သက်နဲ့ တစ်ကိုယ်ကျွန်တော်တို့လမ်းထဲကို တစ်ခါမှ မလာဖူးတဲ့ စည်ပင်သာယာက သုံးဘီး အမှိုက်လားလေးလာလို့ ပါခင်ဗျ။ သုံးဘီးအမှိုက်လားလေး မောင်းတဲ့ ဆရာကလည်း ဟန်ပါပါ စီးကရက်ကိုခဲပြီးဆင်းလာပါတယ်။ လမ်းထဲက အိမ်ရှင်မတွေ အိမ်ရှင် ထီးတွေ အိမ်အကူ ကောင်မလေးတွေ ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့ အမှိုက်တောင်း၊ အမှိုက်အိပ်၊ အမှိုက်ခြင်းကိုယ်စီနဲ့ ၀မ်းသာအားရ အမှိုက်တွေပစ်ကြတာပေါ့။ အမှိုက်ကား (သုံးဘီးအမှိုက်ဆိုင်ကယ်ဆိုပေမယ့် အမှိုက်ကားလို့ပဲ သုံးပါရစေ) ဆရာလည်း တော်ရှာပါတယ်။ မနိုင်တဲ့ တောင်းတွေနဲ့ ဆိုရင် ကူသယ်ပေး အမှိုက်ကားထဲမှာ နေရာပိုကျယ်အောင် တုတ်တစ်ချောင်းနဲ့ ထိုးပြီးနေရာရအောင်လုပ်ပေးရှာပါတယ်။ အမှိုက်ကားလေးက သေးသေးလေးဆိုတော့ တစ်လမ်းလုံးမပြောနဲ့ အိမ်လေးငါးဆယ်အိမ်က အမှိုက်နဲ့တင် ပြည့်သွားရှာပါလေရောပေါ့။
အိမ်ရှင်ထီးတစ်ချို့က အမှိုက်ကားဆရာနဲ့ စကားစမြည်ပြောတော့ အခုဒီလမ်းတွေကို အမှိုက်ကား နှစ်ရက်ခြားသုံးရက်ခြားဆိုသလို အဆင်ပြေသလိုလာရမယ်လို့ စည်ပင်ဌာနက စီမံထားကြောင်းသိရပါတယ်။ အရင်ကတော့ ဒီလိုလမ်းသွယ်တွေမှာ စည်ပင် အမှိုက်သိမ်းစနစ်လုံးဝ မသက်ရောက်လေတော့ တစ်ခါပစ် သုံးလေးငါးခြောက်ရာ(အမှိုက်များရင်တစ်ထောင်နှစ်ထောင်ခန့်အထိ) ပေးရတဲ့ ပုဂ္ဂလိက အမှိုက်တွန်းလှည်းတွေကို အားကိုးရပါတယ်။ အခုစည်ပင်က အမှိုက်ကားကတော့ ပိုက်ဆံပေးစရာမလိုဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့် ၀န်နဲ့အားနဲ့ မမျှတော့ တစ်လမ်းလုံးပစ်ဖို့တော့ မလွယ်ဘူးပေါ့။
အဲဒီတော့ တစ်ချို့အိမ်ရှင်ထီးတွေက လမ်းထဲကအိမ်တွေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး အမှိုက်ကားဆရာကို ငါးရာမျိုးတစ်ထောင်မျိုး တစ်လှည့်စီ လက်ဖက်ရည်ဖိုးပေးဖို့ သဘောတူညီချက်ရရှိကြပါရော။ ဒါက အိမ်ထောင်စုတွေအတွက်လည်းကိုက်တယ်လေ။ အရင်ကဆိုတစ်ခါပစ်ရင် ငါးရာလောက်ကုန်မှ အခုတော့ ဆယ်ခါလောက်ပစ်မှ ငါးရာလောက်ပဲကုန်မှာဆိုတော့ အားလုံးသဘောတူကြတာပေါ့။ အမှိုက်ကားက တကယ်တော့ ပိုက်ဆံပေးစရာမလိုဘူးဆိုပေမယ့် အဲလို လက်ဖက်ရည်ဖိုးပေးတော့ ကိုယ့်လမ်းထဲကို ပိုပြီး မှန်မှန်လာပါစေဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပါ။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အဆင်ပြေတဲ့ သဘောပေါ့။
ဒါပေမယ့်အဲဒီမှာ စဉ်းစားစရာတစ်ခုရှိလာတယ်ဗျ။ ပိုက်ဆံပေးစရာမလို လခစား နိုင်ငံတော်ပိုင် အမှိုက်ကားဆရာကို လက်ဖက်ရည်ဖိုးပေးပြီး မှန်မှန်လာအောင်ခေါ်တယ်ဆိုတော့ အဲဒီအမှိုက်ကား ဆရာကတော့ သဘောကျမှာပေါ့။ အမှိုက်ကားဆရာတင်မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်သူမဆိုသူသူကိုယ်ကိုယ်ပေါ့။ ပြီးတော့သူက ဒါကသူ့ရပိုင်ခွင့်တစ်ခုကိုသတ်မှတ်သွားရင်ကော။ သူ့မှာလည်း လုပ်ပိုင်ခွင့်ကရှိနေတာကိုး။ ၀န်နဲ့ အားနဲ့ မမျှတော့ဒီလမ်းကို တစ်ပါတ်သုံးရက်လာရမယ့်အစား ငါးရက်မှ တစ်ခါလာလာလည်း ရတာပဲလေ။ ဒီလမ်းက လူတွေကို ပိုက်ဆံပေးတယ်ဆိုတော့ ဒီလမ်းကို နှစ်ရက်တစ်ခါလောက်လာမယ်ဆိုလည်း ဖြစ်တာပံပေါ့။ ဒီတော့ တစ်ခြားပိုက်ဆံမပေးတဲ့ မပေးနိုင်တဲ့ လမ်းတွေကြတော့ရော ခေါက်ရေ လျှော့သွားမလား။ သူ့သဘောပေါ့။ အခုကျွန်တော်ပြောနေတာက အမှိုက်ကားဆရာကို ဖြစ်စေ လမ်းထဲက အိမ်ထောင်စုတွေကို ဖြစ်စေ အပြစ်တင်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး ဗျ။ လေ့လာသုံးသပ်ကြည့်နေတာပါ။ ပုံမှန်ပိုက်ဆံမရလဲ လာရမယ့်သူတစ်ယောက်က ပိုက်ဆံရဖူးသွားတော့ ဒီလမ်းကိုလာရင် ရမယ်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကတော့ ရှိနေမှာပဲလေ။ သိကြတဲ့အတိုင်း အောက်ခြေ၀န် ထမ်း ဆိုတာလည်း လစာသိပ်မများဘူးဆိုတော့ သူတို့လည်း ဘေးပေါက်လေးတွေတော့ လိုချင်ကြမှာပဲ လေ။ တနည်းပြောရရင် ဒီနည်းနဲ့ ရတဲ့ဘေးပေါက်ဆိုတာလည်း တခြားနည်းတွေထက် သန့်ရှင်းတယ်လို့ ဆိုရမပေါ့။ ၀န်ထမ်းကို ပြည်သူတွေကဖျက်စီးတယ်လို့ ပြောရအောင်ကျတော့လည်း ပြည်သူတွေဖက်ကလည်း မှားတယ်လို့တော့ ဆိုမရဘူးထင်ပါ့။ ဘယ်သူမဆို စရိတ်သက်သာချင်ကြတာပဲ ဆိုတာ နားလည်ပေးရမှာပေါ့။ ဒါတော့ ဒီနိုင်ငံမှာတင်မဟုတ်ဘူး ဈေးသက်သာမယ်ဆိုရင်တော့ (သူများကို မတရားမလုပ်ဘူးလို့ ယူဆရင်) အခြားနိုင်ငံက လူတွေလည်း ဒီလိုပဲ ဆုံးဖြတ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ သွယ်ဝိုက်သောနည်းနဲ့ သူများကို မတရား (ငွေသုံးပြီး) လုပ်တယ်လို့ ကတ်သီးကတ်သတ် ဆိုရင် လည်းရချင်ရမပေါ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ တခြားပိုက်ဆံမပေးထဲ လမ်းကလူတွေထက် အခွင့်အရေး ပိုရမှာကိုး။
ကဲ အဲလိုဆိုတော့ အသွားစေခိုင်းသူ စည်ပင်သာယာ၊ အမှိုက်ကားမောင်းသူ ကားဆရာ၊ သက်သာလိုသူ လမ်းထဲကလူများ ထိုကြံရာပါများကြောင့် ကံကွက်ကြားမိုးရွာပြီး မည်သူက နစ်နာမည်လည်း ၊ မည်သူသာမည်လည်း တွေးကြည့်တော်မူကြပါကုန်။
Posted by Moe Tain Nyo at 6:21 PM0comments
You can avoid the reality, but you cannot avoid the consequences of avoiding reality.
Buddhism is not only to believe, worship and pray. It is to learn, practice and penetrate.
“ဗုဒ္ဓ္ဓဘာသာသည် သက်ဝင်ယုံကြည်ရုံ၊ ကိုးကွယ်ပသရုံ နှင့် ဆုတောင်း ရုံသက်သက်မဟုတ်ပါ။ ဗုဒ္ဓ္ဓဘာသာသည် သင်ယူရန်၊ လေ့ကျင့်ရန် နှင့် ထိုးထွင်းသိမြင်ရန်ဖြစ်လေ၏။”
ရုပ်ရှင် အညွှန်း (4)
ဟိုအကြောင်း ဒီအကြောင်း (10)
အတွေး ဆောင်းပါး (6)
အတွေး၊ ဆောင်းပါး ၊Science (2)
ဘ၀ဟာ ပလတ်စတစ်ပန်းပင်လို မဖြစ်စေရဘူး။ မျိုးစေ့ကနေ ပေါက်လာပြီး ရှင်သန် ကြီးထွားနေတဲ့ ပန်းပင် ဖြစ်ရမယ်။ လှနေရုံ မဟုတ်ဘူး။ အသက် ရှင်နေရမယ် ဖူးပွင့်နေရမယ်။
အရင် ဘလော့ လိပ်စာ အဟောင်းလေးပါ
မြန်မာစာ မြန်မာ စကား
Myanmar Links 1
Myanmar Links 2
Moe Tain Nyo
Buddhism is not only to believe, worship and pray.
It is to learn, practice and penetrate.